Ukongeza kwi-P40, uHuawei ukwazisile ukubukela i-GT 2e, umncedisi uCelia, iVidiyo kaHuawei nokunye | Iindaba zeGajethi
Ngaphezulu nje kwenyanga eyadlulayo, uHuawei wabhengeza ukuba nge-Matshi 26 izakubakhona ngokusemthethweni eYurophu, Uluhlu olutsha lwe-P40 Uluhlu olwenziwe ziimodeli ezi-3 kwaye esele sithelekisile kwi Oku kubhaliwe ngokulingana kwabo ne Uluhlu lwe-S20 ebelubonise ngoFebruwari odlulileyo.
Kodwa ngalo msitho, ayisiyiyo kuphela Huawei P40 kwiintlobo ezintathu, 4 ukuba sibala imodeli yeLite ethe yangena kwimarike kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, njengoko inkampani yaseAsia ikwanikezela ngewatchwatch entsha Bukela i-GT 2e, Ukongeza kumncedisi wakhe obhaptiziweyo njengoCelia kunye nezinye iinkonzo.
1 I-Huawei Bukela i-GT 2e
1.1 Ukucaciswa kweHuawei ye-GT 2e
2 Inkonzo ye-Huawei VIP
3 Ividiyo yeHuawei, inkonzo kaHuawei yokusasaza
4 UCelia, umncedisi kaHuawei
I-Huawei Bukela i-GT 2e
Ihlabathi le-smartwatch liyaqhubeka nokukhula unyaka nonyaka, kwaye ngoku ibingumthombo obalulekileyo wengeniso kubavelisi abaqhubeka nokubheja kolu hlobo lwesixhobo kwaye apho asifumananga naziphi na ezilawulwa yi-Wear OS, Inkqubo yokusebenza kaGoogle.
UGoogle akazange anike uthando olukhethekileyo kwinkqubo yokusebenza kwezinto zokunxiba ukongeza ekunikezeleni uthotho lwezithintelo abanokuthi abo bavelisi bangabinakho ukuba bafuna ukuyisebenzisa. Oku kunyanzele abavelisi ukuba basebenzise ezabo iinkqubo zokusebenza, ezisebenza ngakumbi kunye nokusetyenziswa kwebhetri esezantsi, enye yeengxaki eziphambili zee-smartwatches.
Ukuzibophelela kukaHuawei kwihlabathi leewatchwatches kuyaqhubeka nokuchazwa kwesigama ebesikusebenzisa kude kube ngoku kwaye kubizwa ngokuba yiHuawei Watch GT 2e. Inkqubo ye- Umtsalane ophambili kwesi sigxina kukuzimelaUkuzimela, ngokomenzi, kufikelela kwiiveki ezi-2. Ukongeza, iyangena ukuya kuthi ga kwi-5 yeemitha, ibonelela ngenkxaso yemidlalo engaphezulu kwe-100 kwaye isinike uyilo lwezemidlalo.
Ukucaciswa kweHuawei ye-GT 2e
Isikrini 1.39 intshi AMOLED
Inkqubo I-Kirin A1
Ukugcina 4 GB yokugcina
Conectividad IBluteooth 5.1 IGPS Wi-Fi
Inkqubo yokusebenza I-Lite OS
Izixhobo I-Accelerometer igyroscope isivamvo senqanaba lentliziyo isivamvo sokukhanya okukufutshane barometer kunye nemagnetometer
Ukuchasa Ukuntywila ukuya kuthi ga kwi-50 yeemitha- 5 ATM
Ukuhambelana I-iOS kunye ne-Android
Ibhetri Iintsuku ze14
Ubukhulu 53 × 46.8 × 10.8 mm
U bunzima I-43 gram
Ixabiso 199 euro
Ityala lenziwe ngentsimbi engenasici kwaye umtya uhlanganiswe kuyo, ke asinakukubuyisela kunye nezinye iimodeli ngokungathi zisinika abanye abavelisi abanjengoApple kunye neSamsung. Olona khetho kuphela kwiWatch GT 2e yokuhambelana nezinto esizithandayo kukuyithenga ngqo kumbala esiwuthandayo (omnyama, obomvu noluhlaza). Izintya zisibonisa uyilo olufana kakhulu nolo sinokuthi silufumane kuluhlu lweNike lweApple Watch, enemingxunya kuyo yonke kwaye basibonise ngoncamathiselo lwebhakethi.
Ukuba sizimisele ukusebenzisa iHuawei yokujonga i-GT 2e ukwenza umlinganiso wemidlalo yethu yangaphandle ngeGPS, Ukuzimela kuncitshisiwe ukuya kwiiyure ezingama-30Ukuzimela ukuba ezinye iimodeli zingathanda ukubonelela xa zisebenzisa i-GPS edibeneyo.
Umlindo ibhaqa ngokuzenzekelayo umsebenzi esiwenzayo, ubuncinci imisebenzi exhaphakileyo, umsebenzi ofanelekileyo kwabo bahlala belibala ukuba i-smartwatch isetyenziselwa into engaphezulu kokubona ixesha kunye nezaziso ze-WhatsApp. Ukongeza kwisantya sentliziyo, ikwabandakanya inzwa ejongene nokulinganisa inqanaba leoksijini egazini.
I-Huawei Bukela i-GT 2e, iya kufika kwintengiso ye-179 euro, kwaye nangona ungekabikho umhla othile wokukhutshwa okwangoku, kunokwenzeka ukuba uyakwenza oko ngesandla iHuawei P40 entsha ekuqaleni kuka-Epreli 2020.
Inkonzo ye-Huawei VIP
UGoogle usinika i-15 GB yendawo yasimahla kunye nokugcina indawo kwilifu leefoto zethu kunye nemifanekiso ngeefoto zikaGoogle. Ngokungadibanisi iinkonzo zikaGoogle, iHuawei ivelisile eyakho inkonzo yokugcina ilifu ebizwa ngokuba yiHuawei VIP Service, inkonzo esivumela nge-ID yethu yeHuawei, ukuba nesipele kunye neefoto zethu, iividiyo, usetyenziso, useto lwe-smartphone ...
Ngaphandle kwentlawulo, sinazo I-5GB yogcino lwasimahla kunye nenye i-50 GB yasimahla kwiinyanga ezili-12 ezizayo.
Ividiyo yeHuawei, inkonzo kaHuawei yokusasaza
Njengoko ingenazo iinkonzo zikaGoogle, nangona zinokufakwa ngokulula ukuba sikhangela i-intanethi, inkampani yaseAsia isinika ividiyo yayo yokusasaza ebizwa ngokuba yiVidiyo yeHuawei, iqonga elenza i-4,99 euro ngenyanga, Isinika ukufikelela kuzo zombini iinkqubo kunye neefilimu, zombini, iYurophu neSpanish.
Kodwa ukongeza, ikwasinika iifilimu zokuqala, iifilimu esinokuthi sizenze irente iiyure ezingama-48 ukonwabela kwi-smartphone okanye kwithebhulethi yethu, nakwixa elizayo, nakwezinye izixhobo. Singavavanya iVidiyo yeHuawei simahla iinyanga ezimbini. Ukuze sikwazi ukufikelela kule nkonzo, sifuna iHuawei / Hlonipha isixhobo nge-EMUI 5.x okanye ngaphezulu, kwaye isazisi sethu sibhaliswe eSpain okanye e-Itali.
Umncedisi omtsha ofikelela kwintengiso, uyayenza esesandleni sikaHuawei kwaye uyenzela ukulungiselela ukunqongophala kweenkonzo zikaGoogle. Igama lakhe, uCelia, unelizwi lomfazi kwaye isinika ukusebenza okufanayo esinokuthi ngoku sifumane abanye abancedisi abanjengoSiri, Alexa, Bixby okanye uMncedisi kaGoogle.
Ayisivumeli nje ukuba sisete ii-alamu, sijonge i-ajenda okanye sithumele imiyalezo, kodwa ikwasivumela ukuba singene kumculo wethu esiwuthandayo, silawule ukudlalwa kwawo, sisebenzise kwaye sisebenzise iindlela kwi-smartphone yethu, sidlale uthotho lwamahlaya, siguqulele imenyu yokutyela, thatha iselfie ...
Kubo bonke abo bachaphazelekayo ngokhuseleko lwakho kunye nemfihlo, iHuawei ithathela ingqalelo oku kwaye ithi Isazisi selizwi sigcinwa kuphela kwisixhobo, njengee-iPhones, kwaye ngekhe ithunyelwe efini. Ukongeza, iyahambelana ne-GPDR yaseYurophu.
UCelia ufika ebambene neHuawei P40, ifumaneka ngeSpanish, isiNgesi nesiFrentshi kwaye iyafumaneka kubasebenzisi baseSpain, eChile, eMexico, eColombia, eUnited Kingdom naseFrance.
Ngokumalunga nelizwi lowasetyhini, akunakulindeleka ukuba phakathi kokukhetha okunikezelwa ngumncedisi, siya kuba nokukhetha tshintsha ilizwi libe yindoda, ngaphezu kwayo nayiphi na into kuba uCelia ligama labasetyhini (okanye ukuba lalibizwa ngokuba yiManolo) i-Alexa, iSiri okanye iBixby ngamagama angathathi hlangothi, ke ngoko sinokubeka isini esifunayo ngokumisela ilizwi lendoda okanye lowasetyhini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo ezinokunxitywa » Ukongeza kwi-P40, uHuawei ukwazisile ngeWatch GT 2e, umncedisi kaCelia, iVidiyo kaHuawei nokunye.
Ezona ndawo zingcono zokukhuphela simahla iincwadi